Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Kismaayo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Kismaayo
Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Kismaayo
October 8, 2017 admin528
Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa goordhow ka duulay garoonka diyaaradaha Cadaado, wafdigan ayaa ku sii jeeda Magaalada Kismaayo oo la filayo inuu maanta ka furmo shirka dowlad goboleedyada.
Madaxweyne Axmed Ducaale waxaa safarkiisa ku wehliya wasiiro iyo xildhibaano, waa safarkii ugu horeeyey ee uu aado Madaxweynuhu tan iyo bilowgii khilaafka Madaxda Sare Galmudug. Madaxweynaha ayaa inta uusan bixin shirar gaar ah la yeeshay Madaxda ciidamada iyo masuuliyiin kale, isagoo kula dardaarmay in ay xaqiijiyaan Ammaanka deegaanada Galmudug.
Shirka Kismaayo ayaa looga arinsan doonaa arimaha Galmudug iyo in dowlad goboleedyadu la yimaadaan aragti mideysan oo ay ku wajahaan siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan in ay xilka ka tuurto hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada.
wixii ku soo kordha safarka Madaxweynaha kala soco ceelhuur.com
Khilaaf Xoogan Oo soo kala dhex galay Gaas iyo ku xigeenkiisa
Muqdisho:Saldhiyo Ciidamada Dowladda oo xalay la weeraray
Nin Mindi wata oo weeraray Safaarada Israel ee Ankara oo la toogtay